I-China Model No: I-Chinese Manufacture Q91Y Series I-Hydraulic scrap metal esindayo imboni yomshini wokugunda kanye nabaphakeli | Hlanganisa phezulu
Imodeli Uchungechunge lwe-Q91Y
I-Max Cutting Force 250-1250Tons
Ubude be-blade 1600-2000mm
Ukusebenza Ukulawula okuzenzakalelayo
Umshini wethu we-Q91Y owuchungechunge lwe-hydraulic heavy duty scrap shear usetshenziswa kabanzi kuzo zonke izinhlobo zensimbi eqinile yemfucuza, imfucuza esindayo, insimbi elula nencane, igobolondo lemoto eyizinsimbi, insimbi eyenziwe ngesakhiwo sensimbi esilula, iphrofayili, ukukhiqizwa kanye nensimbi yensimbi yokuphila, zonke izinhlobo zepulasitiki yensimbi engeyona ayoni (insimbi engagqwali, ingxubevange ye-aluminium, ithusi, njll.) ukupakishwa kokucindezelwa nokugunda ukuze kuhlangatshezwane nezincazelo ezisebenzayo zenkokhiso, uchungechunge lwe-Q91Y uchungechunge lwe-hydraulic heavy duty scrap metal shear machine luyinto efanelekile yezigayo zensimbi, imboni yokuncibilikisa insimbi engenamvubelo, imboni yokusungula kanye nabakhiqizi bempahla eluhlaza.
Umshini wokugunda udoti osindayo we-Q91Y nawo unomsebenzi wokukhipha imfucumfucu, ongakhipha insimbi encane engajwayelekile ebhokisini lempahla yokugunda, ngemva kokukhishwa nokugunda kwensimbi ephukile, ungqimba lokugqwala okungaphezulu nezinye izinto eziyingozi zingase ihlutshiwe kancane, ithuthukisa ukuhlanzeka kwensimbi yensimbi. Ingasetshenziselwa ukugunda imfucuza enzima yamasayizi ahlukahlukene. I-Q91Y uchungechunge lwe-hydraulic heavy duty shear scrap machine ingangena esikhundleni ngokuphelele sokusika ilangabi. Kuphephile futhi kusebenza kahle ukondla ngomshini wokubamba wensimbi noma iloli ye-forklift.
● I-Q91Y series hydraulic Heavy duty duty shear metal machine ithatha isakhiwo sensimbi esihlanganisiwe sokushisela, umshini unokuqina okuphezulu, izingxenye zokushisela ngokwelashwa kokuguga okwenziwa i-annealing, ukuqeda ukucindezeleka kokushisela, ukunemba komshini kuhle, kuzinzile.
● I-blade eyenziwe ngensimbi yethuluzi lokusika inokuphila isikhathi eside nokuqina.
● Ukucaciswa kwe-blade kuyalungiseka, okuthuthukisa ukunemba kokusebenza kwethuluzi lomshini kanye nempilo yesevisi ye-blade.
● Uhlaka oluyinhloko lwebhokisi lezinto ezibonakalayo lwenziwe ngensimbi yesakhiwo esishiselwe, futhi udonga lwebhokisi langaphakathi lenziwe ngensimbi ye-NM500 enokumelana nokuguga okuphakeme kakhulu, okukhuluma ukumelana nokugqokwa kwebhokisi lezinto ezibonakalayo. Ukunyakaza kwekhanda eliphushayo lebhokisi lezinto ezibonakalayo kuqhutshwa uhlelo oluzimele lwe-hydraulic, ngokusebenzisa i-hydraulic motor kanye neketango. Usayizi wento ephushwayo ulawulwa ngokuzenzakalelayo ngokushelela, futhi unezici zokuvikela okuphezulu nokuthembekile kokulwa nokugcwala ngokweqile.
●Isistimu ye-hydraulic enamalungelo empahla yobuhlakani ezimele kanye nomklamo ozimele. Isilinda esiyinhloko se-shear samukela umjikelezo ohlukile ukuze unikeze ukudlala okuphelele emsebenzini wesistimu yamandla e-kinetic. Lonke uhlelo lwe-hydraulic luhlangene futhi ukuhlelwa kwamapayipi kunengqondo, okunciphisa ukusetshenziswa kwamapayipi we-hydraulic kanye nezindololwane, ngaleyo ndlela kuncishiswe isici sokushisa sohlelo lwe-hydraulic futhi kuqinisekiswe ngempumelelo ukusebenza okuvamile nokuthembekile kwesistimu ye-hydraulic.
●Idizayini yethangi likawoyela, umthamo ozwakalayo, ukuqina kwesakhiwo okuphezulu, imbobo yokubuyisela uwoyela kanye nembobo yokumunca uwoyela ihlukaniswa ngokuhlukanisa, kunciphisa ngempumelelo ukushisa kukawoyela we-hydraulic.
●I-Q91Y uchungechunge lwe-hydraulic heavy duty scrap shear umshini wokugunda sebenzisa ukucindezelwa okuphezulu nokucindezelwa kwezinhlangothi zombili zendlela yokudla okulahliwe kanye nezigaba, ukwakheka kwebhokisi lezinto ezibanzi, ngakho-ke ukusebenza kwe-scrap eluhlaza kuhle, ukuminyana okuphezulu ngemuva kokugunda.
●Indawo yokuvula ibhokisi lezinto ezibonakalayo inkulu, ifanele izinto zokwakha, udoti osindayo, izinsimbi zensimbi ezilula nezincane, igobolondo lemoto, isakhiwo esikhulu sensimbi esilula esingajwayelekile, ipayipi lensimbi, ipuleti lensimbi, insimbi yesiteshi, i-I steel, ibha yensimbi kanye amanye amaphrofayili ukugunda, kulula ukungena ebhokisini lempahla, akhulisa ngokugcwele izinga lokusebenzisa okokusebenza.
●Iphaneli ye-PLC yokulawula isikrini sokuthinta ngokuzenzakalela isilawuli esihlanganisiwe esizenzakalelayo, kanye nesistimu yokuqapha inqubo yonke enama-engeli amaningi, elula kubasebenzisi ukuyilawula kanye nokusetshenziswa kwemishini yokulandelela yonke inqubo. Ukusebenza okuzinzile nokunokwethenjelwa, idivayisi yokulawula kude engenantambo, umugqa owodwa wokukhiqiza umshini wokusebenza osekelayo.
● I-Q91Y uchungechunge lwe-hydraulic heavy duty scrap metal shear machine isebenzisa ukulawulwa kwe-valve enkulu ye-flow logic okuthembekile, ukuhlunga okuzimele kanye nesistimu yokupholisa, ingaqinisekisa ukusebenza kahle kwesistimu nokuzinzile. Ukusetshenziswa okuphelele kokuguquguquka kwamandla okungaguquki kanye nobuchwepheshe obusheshayo obuhlukile bungonga cishe u-30% ngenkathi kuqinisekisa okukhiphayo, futhi ukusetshenziswa kwamandla ngethani ngalinye lokucutshungulwa kwensimbi kungaphansi kunezidingo ezijwayelekile zemboni.
I-Max Cutting Force(Ton)
Imvamisa Yokugunda (izikhathi/imizuzu)
Uchungechunge lwethu lwe-Q91Y uchungechunge lwe-hydraulic heavy duty shear machin luhlinzeka ngezingxenye zomshini womkhiqizo odumile, besisebenzisana nabaphakeli abaningi bomkhiqizo abadumile emhlabeni wonke, njenge-SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI njalonjalo iminyaka engaphezu kwe-10.
Imodeli encane ye-Q91Y hydraulic heavy duty heavy shear metal machine ingavikelwa kahle esitsheni esisodwa esingu-40 HQ. Uma sihamba ngesikebhe, sizomboza i-poncho kanye nedekhi ye-Load ukuze sivikele umshini wethu wokugunda wensimbi we-Q91Y hydraulic heavy duty scrap metal.
Buka uchungechunge lwe-Q91Y Umshini wokugunda insimbi osindayo we-Hydraulic wokusika insimbi esebenzayo!
Okwedlule: Inombolo Yemodeli: Umshini Wokulawula Wokukhiqiza WaseShayina Q43 Series Hydraulic Scrap Metal Alligator Shear Machine
Olandelayo: Inombolo Yemodeli: Isilawuli Esizenzakalelayo SaseShayina I-Y83 Series Hydraulic Metal Chip Briquetting Press Machine for Metal Recycling
I-Y81 Hydraulic Baler, I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya, I-Scrap Metal Compactor, Umshini we-Aluminium Foil Baler, I-Pop-Top Can Baler Equipment, I-Leaf Compactor kanye ne-Baler,